Venice ကမ်းခြေ၊ CA၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့်ဘဝ၏ဝန်းရံမှု - Hanukeii
CSI သို့မဟုတ် 'Baywatch' ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကိုသင်ကြည့်သည့်အခါတိုင်းသင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုမြင်ဖူးသောရှုခင်းတစ်ခုရှိသည်။ ပြင်းထန်သောလှိုင်းများ၊ အဏ္ဏဝါစောင့်ကြည့်ရေးပို့စ်၊ အမေရိကန်အလံ၊ လူများပြေးလွှားနေပုံ၊ စကိတ်အကွာအဝေး၌ချားရဟတ်နှင့်အရောင်များသည်စိမ်းပြာရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့်အဖြူတို့အကြားကွဲပြားသောအိမ်မျက်နှာစာများဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့အတူတူပြောနေတယ် အစက်အပြောက် ၎င်းသည်ကြီးမားသောရုပ်ရှင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်လုပ်မှုများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်အနုပညာရှင်များနှင့်ဒီဇိုင်နာများသည်၎င်းတို့ဖန်တီးရန်စိတ် ၀ င်စားသောနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ Hanukeii.
နောက်ထပ်လမ်းလွှဲတစ်ခုကိုမယူဘဲ၊ မင်းစိတ်ကူးနိုင်သလောက် Los Angeles မြို့လယ်ကနေသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အပန်းဖြေမှု၊ အနုပညာနဲ့ကမ်းခြေအကြောင်းမိနစ် ၃၀ ရှိတယ်၊ ငါတို့ပြောနေတာရှိတယ်။ Venice ကမ်းခြေတစ်ချိန်ကအီတလီနိုင်ငံ၊ Venice၊ အီတလီမှယနေ့စိတ်ကူးခဲ့သောဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ထုပ်များစုဆောင်းခြင်းကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ "Venice Turquoise"ဒါပေမယ့်ငါတို့အရမ်းကောင်းတဲ့ငါတို့ရဲ့ ဦး ထုပ်အကြောင်းမင်းကိုမပြောခင်မှာငါတို့ကမင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု bohemian မြို့တော်ကိုသွားလည်ရင်မင်းကြည့်ရမယ့်နေရာတွေ၊ မင်းသိချင်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြမယ်။
Santa Monica ၏ကမ်းခြေနှင့်မြို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသောအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ဇိမ်ခံခြင်း၊ သက်တောင့်သက်သာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပိုစွန့်စားလိုသူများ၊ အရသာများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ခံနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ bohemian soul၊ အားကစားသမားများနှင့်လှိုင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ ဤကမ်းခြေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသည်အလွန်ကြီးကျယ်သောကြောင့် Julia Roberts, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger နှင့် Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်၏နာမည်ကျော်ဗိသုကာပညာရှင်တို့၏အိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သို့သော်၎င်းကိုစစ်မှန်ပြီးမှော်ဆန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသော Venice ကမ်းခြေအကြောင်းကားအဘယ်နည်း။ ဒီအတွက်ငါတို့ ၁၉၀၅ ကိုပြန်သွားရမယ်၊ အမြော်အမြင်ကြီးပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ဗိသုကာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Abbot Kinney က Venice ကိုရွှံ့တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဆိပ်ကမ်းမှာတွေ့တယ်။ သူသည်ဥရောပသို့ခရီးမှပြန်လာပြီးတူးမြောင်းများနှင့်ပင်လယ်ပေါ်တွင်မြို့တစ်မြို့တည်ရှိနေသည်ကိုစပ်စုသောအချက်ကိုစွဲလန်းကာသူ၏ခေါင်း၌သူ၏နောက်ထပ်လက်ရာဖြစ်မည့်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၊ အမြော်အမြင်ကြီးသည့်အတိုင်း၊ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးမျိုးသတ်မှတ်ရန်မှာခက်ခဲသည်။ တူးမြောင်းများ ၀ င်ရောက်လာမှုကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းရိုးတန်းသို့ဤနေရာကို ၀ င်ရောက်နိုင်မှုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအလယ်အလတ်တန်းစားလူတန်းစားများအတွက်ခိုင်မာသောမိသားစုဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒေသတစ်ခုအဖြစ်အပန်းဖြေပန်းခြံတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကိုကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
Santa Monica ကမ်းရိုးတန်းတွင် Venice ကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားသော်လည်းဇာတ်လမ်းသည်မဆုံးသေး၊ ဤအရံသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနှင့် ဦး တည်ချက်ကိုယူသည်။ ယနေ့တိုင်၎င်းသည်ဒေသခံများအားမြို့လယ်သို့ရွှေ့ရန်သို့မဟုတ်နေဝင်ချိန်တွင်လမ်းလျှောက်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဇိမ်ခံ chalet များနှင့်ဖောင်ငယ်များဖြင့်ဝန်းရံထားသော၎င်း၏မူလတူးမြောင်းအချို့ကိုသာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဟိ ဗင်းနစ် ထိုအချိန်၌မင်းထင်သည်မှာ ၃၆၀ ဒီဂရီအလှည့် ဖြစ်၍ ငါတို့ကမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေကိုသွားရင်မင်းသွားရမယ်။ ဗင်းနစ်ကမ်းခြေ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလေထုအရဆုံးကမ်းခြေလို့ယူဆကြတယ်။
၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုသည်၎င်း၏ရေအရောင်တင်မကဘဲ Venice ကမ်းခြေသို့သင်ရောက်လာသောအခါနှစ်သက်ရန်အရာတစ်ခုရှိသည်။ သင်ပထမဆုံးသွားရမည့်အရာသည် Abbot Kinney Boulevard၊ မည်သည့်ဆိုင်များမဆို ၀ င်သောလမ်းဖြစ်သည် haute couture၊ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်သင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း New York သို့ခရီးသွားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုပိုကောင်းအောင်ဥပမာပြရရင်၊ မင်းက Los Angeles ကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ ထောင့်ကိုဖြတ်ပြီး New York ရဲ့ပဉ္စမလမ်းမှာမင်းကိုယ်မင်းတွေ့ရင်မင်း Manhattan ရဲ့အလယ်ဗဟိုကိုဖြတ်ပြီးမင်းကိုယ်မင်းခရီးသွားနေသလိုခံစားရတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်းနေရောင်ကမ်းခြေသည်သင့်အားဝှေ့ယမ်းနေသည်။ တိုတိုပြောရလျှင် bohemian အငွေ့အသက်သည် hipster သံကို ယူ၍ ဤဇိမ်ခံစတိုးဆိုင်များ၏ပြတင်းပေါက်များထဲမှရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
ကဲကမ်းခြေဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားလိုက်ရင်တော့ bodybuilders တွေကိုတွေ့ဖို့ကအရမ်းများတယ်၊ တကယ်တော့အဲဒါကဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကတစ်ခုပါ၊ သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်အားကစားရုံ 'Muscle Beach'၊ ကမ်းခြေကိုလမ်းလျှောက်တာကိုနှစ်သက်သူတွေအတွက်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်တာ၊ သူ၏ကြွက်သားများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော tan ကိုပြသည်။ Arnold Shwarzenegger သည်သူ၏ Terminator နေ့ရက်များတွင်မကြာခဏသွားလေ့ရှိသောအားကစားရုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဒေသခံများပြောကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သဲပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကမ်းခြေကိုကြည့်ရှုနိုင်သောအားကစားရုံငယ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်၊ ၎င်းဘေးတွင်သင်ခံစားနိုင်သည်။ ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်း၊ ကစားကွင်းများနှင့်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် atep သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အထင်ရှားဆုံးနှင့်သမိုင်းကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ငါတို့ပြောမည့်အရာဖြစ်သည်။
အချို့က၎င်းကိုမသိသော်လည်းကယ်လီဖိုးနီးယား၌စကိတ်စီးခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်မင်းကနည်းနည်း သစ်ပင်ကြီး ဒီအားကစားနဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုမင်းရုပ်ရှင်ကြည့်မှာသေချာတယ် Dogtown ၏အရှင်သခင်၊ အင်း၊ Venice ကမ်းခြေဟာလှိုင်းတွေဖြတ်ပြီးလှိုင်းစီးတာနဲ့စကိတ်စီးတာကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့ surfers တွေအတွက်တွေ့ဆုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အများကြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်။ အမှန်တော့၊ သင်တစ် ဦး အပါအ ၀ င်ဖြစ်သော Jesse Martínez၏နာမည်ကိုသင်ရင်းနှီးပေမည် အစောင့် Dogtown ၏ စကိတ်စီးခြင်းတွင်သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသည်ဤပဏာမခြေလှမ်းကိုစခဲ့သည်။
သူ့အတွက်၊ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း Venice Beach ၌သူ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကုန်လွန်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကထီပေါက်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ထိုနေရာတွင်နေထိုင်ခဲ့သောလေထုသည်တမူထူးခြား။ အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Venice Beach စကိတ်ကွင်းတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင် Made in Venice ဟုခေါ်သောကြီးမြတ်သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤစကိတ်ကွင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအကြီးဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကဲလမ်းကြောင်းအဆုံးလား။ ဒါကဘာအကြောင်းလဲ။ မင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအရှေ့ကနေအနောက်ကိုဖြတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်း ၆၆ အကြောင်းမင်းကြားဖူးတယ်၊ အဲဒါကချီကာဂိုကို Los Angeles မြို့နဲ့ဆက်သွယ်တယ်။ Venice သဲသောင်ပြင်သည်ဤလမ်းကြောင်းအဆုံးသတ်သောနေရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါစို့။
ဤလမ်းကြောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးခဲ့သနည်း။ ၁၉၂၈ တွင်ကြီးမားသောစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနှင့်မိုးခေါင်မှုပြင်းထန်သောလှိုင်းများအပြီးတွင်အမေရိကန်ရှိကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ၎င်း၏အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေဖြစ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးစားသောရွှေ့ပြောင်းအခြေချစီးဆင်းမှုများတိုးများလာခြင်းကြောင့်“ ကတိထားရာပြည်” ကိုရှာဖွေသည်။
၎င်း၏အရှည်မှာ ၃,၉၄၀ ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး၊ ခရီးတစ်လျှောက်တွင်များစွာသောဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ဘ ၀ ကိုစတင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်၌သူတို့၏နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သို့ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်ဟိုတယ်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်များဖန်တီးခြင်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးသည်။ အမှတ်များသည်ဤလမ်းကြောင်းကိုအမှတ်သင်္ကေတဖြစ်စေရန်အလွန်လှပသောအမှတ်များဖြစ်သည်။
သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ၊ ဤလမ်းကြောင်းသည်ခမ်းနား။ စွန့်စားမှုရုပ်ရှင်တစ်ခုနှင့်ထိုက်တန်သည်၊ ဥပမာ၊ Thelma & Louiseငါတို့ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စတိုင်နဲ့နေကာမျက်မှန်တပ်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်ကျော်လာတဲ့တရားခံပြေးနှစ်ယောက် ကြောင်မျက်လုံး ကဲ့သို့ Laguna အနက်ရောင်, de Hanukeii.
ဒါကြောင့်သင် Venice ကမ်းခြေကိုသွားလည်ရင်လမ်းကြောင်း ၆၆ ရဲ့အဆုံးကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ အဲဒါကခရီးသွားတွေ၊ စွန့်စားသူတွေနဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကောင်းကောင်းအသုံးမချဘဲထွက်ခွာမယ့်သြဇာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေအတွက်တွေ့ဆုံရာနေရာတစ်ခုဆိုတာမင်းသိလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာမလိုဘဲဒီအခိုက်အတန့်ကသမိုင်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
Venice ကမ်းခြေ၌ထင်ရှားသောအရာသည် turquoise ဖြစ်လျှင်၎င်း၏မျက်နှာစာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများ၌ဤအရောင်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူမည်သူမဆိုသည်နေဝင်ချိန်၏အနီရောင်အရောင်များကိုအိမ်များရှေ့၌ပေးသောဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရသည်နှင့်တူသည်။ မရ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤနေရာကိုအထင်မှားလိမ့်မည်။ မင်းက bohemian နဲ့ယဉ်ကျေးမှုရပ်ကွက်ထဲကိုနည်းနည်းပိုနက်နက်သွားရင်မင်းအရမ်းရောင်စုံဆိုင်တွေအတော်များများကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့တွင်သင်သည်တပတ်ရစ်စတိုးဆိုင်များ၊ ရှေးဟောင်းဆိုင်များ၊ ကျန်းမာသောစားသောက်ဆိုင်များ၊ မြို့ပြအနုပညာရှင်များ၊ တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီနေရာရဲ့ထောင့်တိုင်းမှာမင်းကိုပြောဖို့တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ကမင်းကိုပြောသလိုပဲ၊ အဲဒါကိုကမ္ဘာ့လေထုအရဆုံးကမ်းခြေတွေထဲကတစ်ခုလို့ငါအာမခံတယ်။
နံရံကပ်ပန်းချီဆရာ Rip Cronk သည်ဤအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည် ဗင်းနစ် adriatic မှစိတ် ၀ င်စားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားနှင့်ပစိဖိတ်သို့ပို့ဆောင်သည်။ Venice ကမ်းခြေ၏ကြည်လင်ကြည်လင်နေသောရေပြင်ကိုစီးနင်းထားသောအလွန်ခေတ်မီသော Botticelli's 'The Birth of' သို့စကိတ်စီးရန်ပြေးရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ Cronk ကဒီအနှောင့်အယှက်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ မင်းဘ ၀ ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမေ့မသွားဘဲဥရောပလေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အမေရိကန်မြို့ကြီးတစ်ခု။ ဒီခေတ်သစ် Venus ကိုမြင်ရတာဘယ်လောက်အထင်ကြီးစရာကောင်းလဲ၊ အဲဒါကငါတို့မြို့ရဲ့လမ်းအားလုံးမှာမင်းမှတ်မိတဲ့အတိုင်းနံရံဆေးရေးရဲ့စိမ်းပြာရောင်အရောင်လည်းဖြစ်တယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာကိုလှည့်လည်သောအခါ၊ သူ့အလိုလိုအသက်ကိုဖြာထွက်စေသော ဦး ထုပ်ရှိခြင်းသည်အနုပညာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ၎င်းကိုသင်မြင်သည့်အခါတိုင်းသင်ကဘ ၀ ဟုထင်သည်။ ရိုးရှင်း။ မရှုပ်ထွေးသောဘဝသည်အနုပညာအတွက်ဖြစ်သည်။ မင်းဒီအရောင်ကိုမင်းပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာကယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနဲ့ပျော်စရာမြို့ Venice Beach မှာ။
ငါတို့ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေရဲ့ဒီမှော်ထောင့်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုမင်းကြိုက်မယ်၊ ငါတို့နောက်တစ်ကြိမ် Los Angeles မြို့ကဖြစ်နိုင်တဲ့ရူးသွပ်မှုကိုလက်စသတ်ဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ မိနစ် ၃၀ ဝေးတာကဒီချစ်သူတွေဆီကိုဒီနည်းနည်းလေးထွက်ပြေးတာကိုသတိရပါ။ #ခြေဖဝါးဘဝ။